Sunday, 11 March 2012 14:31	नागरिक
रोशन साँवा- नेपालमा सबभन्दा बढी पुस्तक कसले लेखे होलान्? यसको सही र आधिकारिक जवाफ कतै अभिलेखीकृत छैन। तर तारानाथ शर्माको दाबी छ, 'सबभन्दा बढी पुस्तक मैले लेखेको हुँ। अहिलेसम्म मेरा दुई सय २६ पुस्तक छापिइसकेका छन्।' उनको यो सूचीमा सम्पादन गरेका पुस्तक पर्दैनन् रे।
Sunday, 04 March 2012 15:34	नागरिक
राजेश केसी- साँझ सुन्धारा कार्यालयबाट ललितपुर घर फर्कंदा बाग्मती पुलमा प्रायः भइरहने सुरक्षा जाँचमा रोकिएँ। म सधैं गाडीको हेडलाइट निभाएर भित्रको बत्ती बालिदिन्छु, ताकि सुरक्षाकर्मीलाई सजिलो होस्। प्रायः 'जानुस्' भन्थे। त्यस दिन कागजपत्र सोधियो।
एक ट्राफिक प्रहरी नजिकै आएर सोधे, 'ड्रिङ्क गर्नुभा'छ?'
Sunday, 04 March 2012 15:31	नागरिक
गोविन्द वर्तमान- लहरै राखिएका चित्रहरूको आकृति अनायास फेरिन्छ। दशकौं पछिल्तिरको अतीतमा तिनीहरूसँग परिचय भएको थियो। जीवनको उतरार्द्धतिर आइपुग्दा अब फेरि ती अपरिचित भएका छन्। नेपाली भाषाका शब्दका फेरिएका अनुहारहरूलाई लिएर म यसो भनिरहेको छु।
Sunday, 04 March 2012 15:26	नागरिक
बसन्त बस्नेत- त्यो बेला इलाम बजारमा बिजुलीबत्ती थिएन। इलाम क्याम्पसमा मध्यरात १२ बजेसम्म कवि गोष्ठी हुँदै थियो। प्रकाशपथमा एक्कासि आगलागी भयो। लेखक र पाठकको भीड गोष्ठी छाडेर आगो निभाउन हुर्रियो। साहित्य गोष्ठीका सहभागी संयोगले जागै थिए। नत्र इलाम उबेलै जलेर सखाप हुन्थ्यो।
Sunday, 26 February 2012 10:00	नागरिक
नयनराज पाण्डे- आकाशमा सूर्य थोपाथोपा भएर पग्लिरहेको छ र धरतीमा बग्दैछ। आगोको नदी भएर। के पत्थरपुरवाका गरिब बासिन्दाको शरीरबाट बगिरहेको आगोको यो नदीलाई नै पसिना भनिएको हो?
Saturday, 25 February 2012 15:21	नागरिक
मनोज अधिकारी, पोखरा- जापानबाट दुई वर्षअघि घर फर्कंदा साथीहरूले सुन, हिरा र मोतीका बहुमूल्य गरहगना रोजे। महँगा विद्युतीय सामान लिएर आए। मीनाकुमारी (मिनु) गुरुङका झोलामा भने जापानी तरकारीका बीउ, झार काट्ने मेसिन, टाउकोदेखि हातगोडामा लगाउने रबरका पञ्जा, एप्रोन, बुट र अन्य कृषि औजार थिए।
कपुरसँग तीन दिन
Saturday, 25 February 2012 15:19	नागरिक
मनोज दाहाल- मैले कपुरलाई नभेटेको कति भयो?
अहिले ठ्याक्कै सम्झन सक्दिनँ। सायद महिनौं।
दुई साताअघि अचानक उसले धनगढीबाट फोन गरेर 'काठमान्डु आउँदैछु' भनेपछि मेरो हृदयमा साँच्चिकै झंकार उठेको थियो।
तीन महिनादेखि उसको यात्रामा 'ठहराव' आएको थियो जसका कारण मैले कपुरबारे लेख्न पाएकै छैन। अब 'ठहराव'मा भएको युवकबारे के लेख्नु पनि!